CSR | 3T Group of Company - Bata Myanmar
3T Care Foundation
"Our philanthropy is children and offering themabrighter tomorrow"
Our intention is to take care of the helpless kids’ education, health and standard of living.
အင်းလေးမြောင်းဝကြီးကျေးရွာရှိ (ECCD) မူကြိုကျောင်းတွင် စားသောက်ဖွယ်ရာ နှင့် အနွေးထည်များလှူဒါန်းခဲ့ပါသည်
January 2019 - ထွန်းမေတ္တာဖောင်ဒေးရှင်း( 3T Care Foundation) မှအင်းလေးမြောင်းဝကြီးကျေးရွာရှိ (ECCD) မူကြိုကျောင်းတွင်ကလေးများတွက်လစဉ်စားသောက်ဖွယ်ရာများနှင့်အနွေးထည်များလှူဒါန်ခဲ့ပါသည်။ [gallery...
တိုင်းရင်းသာလူမျိုးမိဘမဲ့ကလေးများဖွံ့ဖြိုးရေးပရဟိတ (ကျား) ကျောင်း နှင့် အင်းလေးမြောင်းဝကြီးကျေးရွာရှိ (ECCD) မူကြိုကျောင်း သို့လှူဒါန်းမှု
ထွန်းမေတ္တာဖောင်ဒေးရှင်း( 3T Care Foundation) မှ တိုင်းရင်းသာလူမျိုးမိဘမဲ့ကလေးများဖွံ့ဖြိုးရေးပရဟိတ (ကျား) ကျောင်းအားလှူဒါန်းခြင်းနှင့်အင်းလေးမြောင်းဝကြီးကျေးရွာရှိ (ECCD) မူကြိုကျောင်းတွင်ကလေးများတွက်လစဉ်စားသောက်ဖွယ်ရာများလှူဒါန်ခဲ့ပါသည်။ [gallery...
တိုင်ရင်းသားလူမျိုးမိဘမဲ့ကလေးများဖွံ့ဖြိုးရေးပရဟိတ (ကျား) ကျောင်း သို့ လှူဒါန်းမှု
3T Care Foundation ရဲ့အထူးနေ့လေးတစ်နေ့အဖြစ် Bata နဲ့ပူးပေါင်းပြီးလှူဒါန်းမှု့လေးတစ်ခုအဖြစ်တိုင်ရင်းသားလူမျိုးမိဘမဲ့ကလေးများဖွံ့ဖြိုးရေးပရဟိတ (ကျား) ကျောင်းမှာတန်ဖိုးအားဖြင့်၂၄သိန်းကျော်ကိုပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်သွားရောက်လှူဒါန်းဖြစ်ခဲ့ကြပုံလေးများကို 3T Care Foundation...
Bata ရဲ့တန်ဖိုးငွေစုစုပေါင်း (၁၀၂၅၆၀၀၀)ကျပ်အလှူအတန်းလေးတခုကိုဒီနေ့မှာမှန်ကင်းဘုန်းတော်ကြီးသင်ပညာရေးပရဟိတကျောင်း (၁၀/တောင်၊၁၁/ရပ်ကွက်၊သာကေတ) ကိုဝမ်းမြောက်ကြည်နူးစွာသွားရောက်လှူဒါန်းဖြစ်ခဲ့ပုံလေးကို Bata ချစ်သူ Customers များကိုဝေမျှပေးလိုက်ပါတယ်နော်
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး သန်လျှင်မြို့ ဖားကူးကျေးရွာ ဘုန်းတော်ကြီးသင်ပညာရေးကျောင်းသို့ လှူဒါန်းမှု
3T Care Foundation မှသန်လျှင်မြို့နယ်၊ ဖားကူးအနောက်ကျေးရွာရှိသော သာသနာ့မဏ္ဍိုင်ကျောင်းသို့၁၂သိန်းကျော်တန်ဖိုးရှိသည့် ကလေးဖိနပ်များကိုမိဘမဲ့ကလေးများထံသို့ 3T care foundation မှ အဖွဲ့ဝင်များစိတ်အားထက်သန်စွာဖြင့်၁၇.၅.၂၀၁၈ရက်တွင်သွားရောက်လှူဒါန်းခဲ့ပါသည်။ [gallery...
မြောင်းဝကြီးကျောင်းသို့ ဒီဇင်ဘာလကုန်ရက်တွင် သွားရောက်လှူဒါန်း ခဲ့သော ပုံရိပ်များ
Build the future program , How to donate?
Have3categories for donation.
(1)Â Higher education
(2)Â Building School
(3)Â School supply